10 Ahịa ahia kacha mma gburugburu ụwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ahịa ahia kacha mma gburugburu ụwa
(Emelitere ikpeazụ On: 31/01/2021)
Nwere ike ịga njem gburugburu ụwa, ma ị ga-ahụ ihe kasị mma nke ebe niile site na nri. Anyị 10 ahịa nri kacha mma gburugburu ụwa ga-agwa gị ihe nzuzo niile gbasara ndị ya, omenala, akụkọ ihe mere eme, na otu esi agwakọta ya, site na nri ọ bụla sitere na pasta, mkpụrụ osisi kpakpando, na sausaji. Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ezughị, nwere ike ịjụ ụlọ nri’ ndị nwe maka ndụmọdụ nke onye nyocha, site na Europe ruo China.
1. Ihe nkuzi Saleya Food Market Na Nice
Ahịa kachasị n'èzí na Nice bụ ahịa nri na ifuru na Cours Saleya na Old Nice. Lee ị ga-ahụ achịcha dị iche iche, cheese, ahịhịa iji weghachite dị ka ihe ncheta, na nri pụrụ iche nke mpaghara.
Ọ bụghị naanị na ị ga-eri nri kachasị mma nke French, ma ị ga-ahụ ya niile na ikuku nke ikuku ọhụrụ. Okooko osisi guzo nso mezue ọnọdụ maka a magburu onwe culinary ahụmahụ.
Ahịa nri dị ịtụnanya nke Nice ga-echere gị kwa ụtụtụ, ewezuga Mọnde.
2. Ahịa ahia kacha mma n'ụwa: Market Market In London
A maara London maka ahịa ahịa n'okporo ámá ya dị ịtụnanya, agbata obi mara mma, na okporo ámá na vibes pụrụ iche. Onweghi ihe ga - asọ mpi na ọnọdụ pụrụ iche ma dịkwa ndụ na ahịa nri London, na ahịa nri Borough kacha mma.
N'ebe a, ị ga-ahụ nri n'okporo ámá kacha mma: Achịcha Kappacasein, achịcha Achịcha achịcha na achịcha, Oriakụ. Achịcha anụ ezi nke King, na nke anyaukwu nke Ewu ice cream maka eji megharịa ọnụ. Ahịa a dị ịtụnanya na-anabata ndị ọbịa kwa ụbọchị, maka nke ikpeazu 1,000 afọ, ọ bụkwa otu n'ime akara ngosi London kachasị elu.
3. Ahịa ahia kacha mma n'ụwa: Ahịa Sanyuanli Na Beijing
Mkpụrụ osisi na osisi dị obere, Sanyuanli bụ otu n'ime ihe nzuzo zoro ezo nke Beijing. Ahịa nri bụ ebe ndị isi obodo na ndị ọdịda anyanwụ na-abịa ịzụta mkpụrụ osisi kpakpando ha na nri ọhụrụ, na ahịhịa na-ebubata
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na-amasị inwe na kichin, chọrọ ka e si n'ike mmụọ nsọ, nka bu ebe. Na Sanyuanli ahia ahia ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla, na ọnụ ahịa ahịa, mana kwụọ ụgwọ naanị na ego. Ahịa nri Sanyuanli dị na Chaoyang District ma na-emeghe kwa ụbọchị.
4. Ahịa nri kacha mma na Munich: The Viktualienmarkt
Y’oburu na ibu nnunu, mgbe ahụ na 6 am a ga-eji kọfị kọfị ọhụrụ na pretzels na-anabata gị. Ebe a na-ere nri achịcha Karnoll bụ otu n’ime nri nri mbụ ga-emeghe na ahịa nri Viktualienmarkt na Berlin.
Na mgbakwunye na ọpụrụiche Munich a, na Viktualienmarkt ị ga-enwe ọmarịcha sọseji mara mma na nri Bavaria ndị ọzọ. Na square dị n'etiti Frauenstrasse na Heiliggeistkirche, ị ga-ahụ ahịa ndị ọrụ ugbo na ebe nzukọ Muncheners.
5. Ahia ahia kacha mma na China: Kowloon City Wet Market Na Hong Kong
Na ọnụ ọgụgụ pụtara ìhè nke 581 ụlọ, Ahịa Kowloon bụ ahịa kasịnụ na Hong Kong. ’Ll ga-ahụ ahịa a dị ịtụnanya na-emeghe kwa ụbọchị site na 6 onwem na 8 pm, na dị nnọọ 14 Nkeji site na ịga site na ọdụ Lok Fu. Oge kachasị mma iji gaa ahịa Kowloon bụ n'abalị mgbe ọkụ na-agbanye, na mmemme oriri na-amalite.
Kowloon City Wet market na-enye ngwaahịa kachasị mma, site na nri mmiri na akwukwo nri. Ahịa a buru ibu, na ị ga-achọ ụbọchị dum iji kpuchie ha niile 3 akụkọ, bido na nri ụtụtụ Hong-Kong rue nri ehihie na nri abalị. Nke a gụnyere ịnụ ụtọ nri Thai ebe ọ bụ na ndị Thai bi ebe a bụ nke kachasị.
Ndụmọdụ anyị kachasị mma maka ahịa Kowloon bụ isoro ndị mmadụ. N'ihi ya, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa kachasị ewu ewu na-enye ngwaahịa ndị dị ọhụrụ, ekele ntụgharị dị elu nke ngwaahịa.
6. Ahịa Quadrilatero Na Bologna Italytali
Na-esi ísì ụtọ nke mmanụ bọlsọm, ụdị pasta, na mortadella, Ahịa nri Quadrilatero bụ eluigwe na-eme nri ngwa ngwa. ’Ll ga-ekweta na Italian nri bụ otu nke kasị mma n'ụwa, na nri n'okporo ámá dị n'elu chaatị nri na ụwa dum.
Ọ bụrụ na ị ka nwere ohere, mgbe ahụ Romanzo si tagliere nke ịkpụ oyi ga-abụ oriri maka uche. Ga ahụ ahịa nri Chukwu a dị nso Piazza Maggiore, imeghe Mọnde ruo Satọde.
Venice ka Bologna jiri ụgbọ oloko
Florence gaa Bologna na ụgbọ oloko
Rome ka Bologna jiri ụgbọ oloko
Milan na Bologna nwere ụgbọ oloko
7. KadeWe Ahia ahia na Berlin
Anyị KadeWe nri ahịa bụ otu n'ime ihe ndị kasị dara oké ọnụ nri ahịa na anyị 10 ahịa nri kacha mma na ndepụta ụwa. Ahịa nri German a dị n'otu n'ime ụlọ ahịa kachasị na Berlin ma gbasaa na ala dum.
N'ihi ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ụlọ nri, ị ga-ahụ nhọrọ na-enweghị atụ nke nri na ahịa nri KadeWe. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị fancy cheese, mgbe 1300 iche iche cheese na gị nhọrọ. ma ọ bụ, ọmarịcha desserts na ọdịnala wurst, dị ka ahịa KadeWe, bụ maka ọmarịcha nri na-atọ ụtọ.
8. Ahia ahia Bastille Na Paris
Na-eri nri na nnukwu nri ahịa na Paris bụ ihe onye ọ bụla hụrụ nri n'anya kwesịrị ime. A na-akpọ nnukwu ahịa ahụ n'aha nnukwu Mgbanwe. Yabụ ị ga-eji anya gị na uche gị nụrụ ụtọ ihe niile Paris nwere.
Ugboro abụọ n'izu a ga-eji aka na-emeghe gị na nke French. Ga-eso ndị obodo ahụ jikọọ ma nwee ọ pastụ na achịcha achịcha French, ohuru chiiz, na ọmarịcha sausaji. Naanị gaba na Boulevard Richard Lenoir, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke ụlọ nri, isi, na na agba.
9. Ahịa Azụ Rialto Na Venice
Na mmiri nke Ọwa Mmiri, ị ga-ahụ ahịa nri kacha ochie na Venice, Azụ Azụmaahịa Rialto. Akpọrọ aha ya na etiti mmiri dị na Venice, na Rialto azụ ahịa ahịa na-enye ihe ịtụnanya dịgasị iche iche nke ihe oriri na mmiri ma na-agakọ nso na Venetians.
Ahịa Rialto na-emeghe site na 8 m ruo nri ehihie, Tuesday ruo Saturday. ’Ll ga-ahụ Pescheria na Erberia n'akụkụ, ya mere ị nwere ike nweta ihe ọ bụla ịchọrọ maka nri ehihie, site na inine ohuru rue scallops ogologo site n’oké osimiri.
10. Ahia Ule nke Testaccio Na Rome
Oge udu mmiri Italiantali ma ọ bụ ngwụsị izu udu mmiri, na Testaccio nri ahịa bụ ihe kasị mma hangout ebe ke Rome. Ahịa nri a dị ịtụnanya dị na saịtị ndị Rom mgbe ochie, ya mere, ị ga-ata ụta na efere pasta ọhụrụ a kara aka na akụkọ ntolite oge ochie.
A na-akpọ ahịa ahịa Testaccio Nuovo Mercato ebe ọ kwagara na ebe ọhụụ ya na mpaghara Testaccio 80 afọ ndị gara aga. Otú ọ dị, ị ka ga-ahụ igbe nri ochie n'okporo ámá, Sandites na Vali na igbe 90, Pasa ọhụrụ Casa Manco dị na igbe 22, na ọtụtụ ndị ọzọ.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka atụmatụ a-agaghị echefu echefu culinary njem gafee ụwa ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Food Markets gburugburu ụwa” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-markets-world%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe zh-CN ka / fr ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
BestFoodMarketsInChina BestFoodMarketsInEurope BestFoodMarketsInTheWorld Chika Okpala EzigboPlacesToEatEurope nri nri nri